Atileetiin Keenyaa Eliud Kipchoge rekoordii sa'aatii lamaa cabsuuf kutateera - BBC News Afaan Oromoo
Shaampiyoonaa maaraatoonii addunyaa fi Olimpikii ka tahe atileet Eliyuud Kipchoogee Ostiriyaa, Viyenaa galeera.
Imalli isaa kunis imaloota kaanirraa daran adda. Maaliif jennaan- atileetiin kun nama isa jalqabaa km 42 sa'aatii lamaa gadiin nana xumura jechuun ka'e.
Magaalaa Eldoreet kaampii leenjii itti taasisaa tureerraa xayyaara dhuunfaan kan imale.
Badhaasa atileetii cimaa bara 2018'f eenyu kaadhimame?
'Kana mo'achuun anaaf akka nama du'ee ka'eeti' Atileet Qananiisaa
Xayyaara dhuunfaa kanas kan isaaf dhiyeesse biliyoonara Biritiish Sir Jim Ratcliffe yommuu tahu, abbaan qabeenyaa kun rekoordiin kun akka cabu daran barbaadu.
Kipchogeen rikardii maaraatoonii addunyaa of harkaa qaba - sa'aatii lama, daqiiqaa tokkoofi sekoondii 39. Egaan Kipchogeeen maaratoonuudhumti maaliif sa'aa lamaa gadi hin galamu jechuun maaraatoonii Barliin irraa hafee qophaayaa bahe.
Fiigichi inni amma taasisuuf jedhu kunis ''INEOS 1:59 Challenge'' jedhamee waamama.
Kan adeemsifamus biyya Ostiriyaa (Austria) daandiiwwan magaalaa Viyeenaatti wayita tahu, qopheessitoonni fiigicha kanaa haga yoonaa guyyaa fi sa'aatii fiigicha seena-qabeessa kanaa ammallee hin beeksisne.
Haalli qilleensaa mijataa tahuu fi dhiisuusaa ilaalaa jirus jedhameera.
Kipchogee wayita Veenaa galu simannaan kan taasifamef yogguu tahu, daandiiwwan irra fiigus ilaaleera.
''Sababni Viyeenaan fiigicha INEOS 1:59 Challenge'f itti filatamteef, ji'a ammaa kana keessa haala qilleensaa mijataa waan qabduuf,'' jechuun qopheessitoonni fiigicha kanaa gaazexaa Daily Nation jedhamutti himaniiru.
Yaaliin rekoordii cabsuu si'anaa kunis, Kipchoogeef yaalii yeroo lammaffaati.
Caamsaa 2017ttis Xaaliyaanittis yaalii walfakkaatu taasisee ture.
Guyyoota muraasa dura Qananiisaan Rikoordii Maraatoonii Kipchoogeen qabatee jiru kana cabsuuf sekoondii lama qofatu isa hanqatee ture.
Qananiisaan Rikoordii Maraatoonii Addunyaa cabsuuf sekoondii lamaaf qofa hanqisee mo'ate
29 Fuulbana 2019